Wondershare MobileTrans User Guide - Android ka iOS
MobileTrans Guide: Android ka iOS
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android na iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables. Chere maka Wondershare Mobile Trans mata na ngwaọrụ.
PS: Ọ bụrụ na iOS ngwaọrụ-egosi na n'elu na "Isi Iyi" n'akụkụ mgbe ọ ga-gị "Destination" ngwaọrụ, ị nwere ike ịgbanwee abụọ site na ịpị "tụgharịa" taabụ n'elu ọdịnaya ị chọrọ nyefee.
Nzọụkwụ 4. Lelee faịlụ ị ga-achọ nyefee. Ị nwere ike ịlele "Clear Data tupu Copy" igbe bụrụ na ị chọrọ ihichapu data na ebe ekwentị tupu edegharị ọhụrụ data.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite Copy" iji malite usoro. N'ihi na arụmọrụ, Akwụpụla ngwaọrụ ruo mgbe usoro zuru ezu.
Ọzọ: iOS ka Android